समाचार - प्लास्टिक मा प्रतिबन्ध जारी गरीएको छ, र १००% बायोडिग्रेडेबल झोला आगोमा छन्!
प्लास्टिक मा प्रतिबन्ध जारी गरीएको छ, र १००% बायोडिग्रेडेबल झोला आगोमा छन्!
युरोपेली संसदले भारी मात्रामा प्लास्टिक प्रतिबन्ध पारित गरेको छ, र १५ देश/क्षेत्रहरु प्लास्टिक मा प्रतिबन्ध जारी गरीएको छ। धेरै भन्दा धेरै देशहरु सरणी मा सामेल, र पर्यावरण जागरूकता एक तातो प्रवृत्ति भएको छ! प्लास्टिक उत्पादनहरु कच्चा माल को रूप मा पेट्रोलियम को उपयोग, र संसाधनहरु बिस्तारै दुर्लभ छन्। प्लास्टिक उत्पादनहरु को पुनर्चक्रण दर धेरै कम छ, र रिसाइकिलिंग मुश्किल छ। प्लास्टिक उत्पादनहरु को जलाउने विषाक्त र हानिकारक ग्याँसहरु उत्पादन गर्दछ, मानव जीवन र स्वास्थ्य लाई खतरामा पार्छ, र प्रकृति प्रदूषित गर्दछ, र सेतो फोहोर को एक तूफान गठन गरेको छ! लामो Juntian शुद्ध पर्यावरण संरक्षण कम्पनी राम्रो सेतो फोहोर को खतराहरु को बारे मा सजग छ र सक्रिय रूप मा देश र विश्व पर्यावरण संरक्षण संगठन को कल को प्रतिक्रिया। बायोडिग्रेडेबल फोहोर झोला को गहिरो खेती को दस बर्ष पछि, हामी विकसित र कच्चा माल को रूप मा मकै स्टार्च र PBAT को उपयोग गरी झोलाहरु उत्पादन गरेका छौं। यो फोहोर झोला कार्बन डाइअक्साइड र पानी मा उपयुक्त औद्योगिक composting शर्तहरु को तहत हानिकारक हुन सक्छ।
१००% बायोडिग्रेडेबल पालतू रद्दी टोकरी झोला मात्र कुकुर हिड्नेहरु को लागी एक वरदान हो। उनीहरुलाई अब पार्क र शिविर दृश्यहरु मा कुकुर poop सफाई को बारे मा चिन्ता छैन। यो बिल्कुल फोहोर हात र वाटरप्रूफ बिना सफा गर्न सकिन्छ। यो पनि पर्यावरण को रक्षा र स्वच्छता को ख्याल राख्न सक्छ। यो फोहोर झोला एक ब्रेकपोइन्ट डिजाइन को उपयोग गर्दछ, एक चिकनी र नाजुक सतह, निविड़ अंधकार र गन्ध-प्रमाण संग, र भित्री कोर पनि एक बायोडिग्रेडेबल कागज कोर हो, जो बाहिर बाट वातावरण को रक्षा गर्दछ। यो पनी धेरै प्रयोग मा विचार गरीन्छ, र प्रयोगकर्ता एक औषधि संग सुसज्जित छ, जो कर्षण रस्सी मा टाँस्न सकिन्छ हात मा यो पकड बाट बच्न को लागी।
Longjun Tianchun पर्यावरण संरक्षण कम्पनी OEM, ODM स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोगकर्ताहरु को व्यक्तिगत अनुकूलन को आवश्यकताहरु लाई पूरा, र ईमानदार सहयोग को सिद्धान्त को आधार मा ग्राहकहरु लाई सेवा। सबैलाई परामर्श र खरीद गर्न स्वागत छ।
पोस्ट समय: मार्च 25-2021